Maakhir ma Dhalan maalin gelinkeed.
C/risaq Shirwac, razshirwa@gmail.com
Qoraalka halakan hoose ayuu ka bilaabnayaa
Faaladan waxaa igu kalifey iyadoo aad moodid in dad u dhashey ay iska fogeynayaan Dowlada u dhalatey oo aad moodid iney noqdeen kuwo iyagu dhaliilo iyo aflagaadoba usoo jeediya, kuna tilmaamey farxada beesha u timi kuwo shakhsiyaad ay wataan oo u diidan beeshooda guusha usoo hoyatey kuna andocoonaya waxyaabo aan sal iyo raad toona lahayn.
Farxadii tolkooda kuwo ka naxay baa jira oo aad moodid in la yiri Malakul Mootkii baa idin hortaagan, diidan in caasimad u noqoto Magaalo ay ka yimaadeen, ogolna iney caasimad u noqot magaalo aan laga rabin.
Maakhir ma Dhalan maalin gelinkeed, riyona maaha sababtoo ah waxaa jirey shirar ay beeshu yeesheen oo ay ku yeesheen Badhan, Buraan iyo Dhahar oo lagu falan qeeyey maamul in loo dhiso deegaanka Sanaag iyo Galbeedka Gobolka Bari.
Shirkii ugu horeeyey ee ay yeeshaan Beeshani waxa uu ahaa kii Badhan oo arimaha ugu waaweynaa lagaga Hadley uu aa ahaa sidii deegaanka loo ilaalin lahaa, amnigiiisa loo sugi lahaa, loo kobcin lahaa, maamul heer degmo, heer gobol loo sameyn lahaa.
Shirkii CAAQIBO ee Buraan waxa uu ahaa shirkii laga soo saarey xeer beeleedka cusub oo ay ku saxeexan yihiin Caaqilo, Suldaano, Garaado iyo Suldaanka Guud ee Beesha.
Xeerka Deegaanka ee shirkii CAAQIBO waa kan ka dhaxeeya Dadka Reer Maakhir waana kii lagu xusey qodobkiisa 7.4 oo qorayey sidatan (Si loo sugo nabadgelyada waa in layska ilaaliyo waxkasta oo keeni kara iska hor imaad sida siyaasada damaca ay horseedka u yihiin danaystayaal iyo shakhsiyaad u adeegaya gacan ka baxsan degaanka. )
Markaa su'aashu miyeysan ahayn Gacanta siyaasadeed ee ka baxsan Deegaanka kuwa u adeegaya Puntland iyo Somaliland?
Maakhir miyeysan oran ANAGU LABADAAS MAAMUL MIDNA KUMA JIRNO EE WAXAANU NAHAY MID KA MADAX BANAAN?
Odayaasha la leeyahay waa la dabo marey miyeysan ahayn kuwii shaleyto lahaa HA NAGA BAXEEN PUNTLAND IYO SOMALILAND?
MIYEYSAN AHAYN KUWII LAHAA ANAGU SOO JIREEN BAANU NAHAY EE MAAMULADAASI NOOMA TALIYAAN?
Miyeysan idaacadaha aduunka ka sheegin hadaladaas oo wareysiyo iyo warsaxaafadeedyo bixin?
Qofka marka uu diidan yahay arin mar marsiinyo ma waayo, kuwan sheeganaya iney Puntland Warsangeli wax ka aas aaseyn (waana runtood) hase yeeshee hadii dantii beesha laga heli waayey maxaa raacatada kaa dhigey?
Miyeysan ahayn Puntlandtu tii horseedey in awrka la isku kacsado oo Hartinimadii noqotey markaan kuu baahanahey?
Miyeysan Puntland ahayn tii Dhuxusha iyo xaalufinta deegaanka Warsangeli horseedey?
Miyeysan Puntland ahayn tii Wiilasha Warsangeli buurahooda ugu tagtey oo duulaan kusoo qaadey iyadoo dooneysa dhac iyo bililiqo?
Ma garanayo ujeedada ninka diidan Badhan ama Ceerigaabo ama Laasqoray ama Dhahar iney caasimado u noqdaan ogolna iney Garowe ama Hargeisa u noqoto caasimad?
Maakhir waa xalka loo baahnaa oo mudneyn in 16 Sano ka hor la qabto oo soo raagtey inta hadba Galbeed la aadayey marna Nugaal la aadayey, maantana waa guul usoo hoyatey beesha Warsangeli iyo dhamaan deegaanka.
Cidii ciil ka qabta maamulkan iyada uun baa ciilkeeda la bakhtiyi waayo waa go'aan shacbi, waa kacaan shacbi, waa masuuliyad ay isa saareen waxgaradka beesha, caaqil iyo siyaasiba.
Maakhir waxa uu markhaanti ka yahay rabitaanka Shacabka Sanaag iyo Galbeedka Bari ee maaha mid si fudud loo riixi karo,.
Dowlad Goboleedka Maakhir ayaa kordhisey tirada xubnaha Wakiilada iyadoo Beelaha Jubada Hoose xubno laga siiyey
Badhan:- Dowlad Goboleedka Maakhir State of Somalia ayaa waxay kordhineysaa tirada Goleheeda Wakiilo iyadoo beelaha Jubada Hoose ee Cawramale laga siinayo xubno dheeraad ah si ay uga qeyb qaataan Maamulka Maakhir State iyadoo tirada la siiyey ay gaarayaan 5 xubnood.
Tirada loo qoondeeyey Golaha Wakiilada markii hore ayaa waxay ahaayeen 33 wakiil oo ka socda beelaha Warsangeli iyadoo hadana ay tirada Wakiiladu ay gaareyso ilaa iyo 38 xubnood.
Masuuliyiinta sar sare ee maamul Goboleedka Maakhir ayaa waxay noo cadeeyeen goor aanu wax ka weydiiney sababta keentey in tirada xubnaha Golaha wakiilada la kordhiyo noo sheegey iney u arkeen iney daruuri tahay in beesha Cismaan Ibraahim ee Kismaayo ay helaan wax u metala Golaha Wakiilada ee Maakhir State of Somalia.
Dowlada Goboleedka oo dhidibada loo istaajiyey kadib markii la arkey dayaca ka muuqda Gobolka Sanaag iyo Galbeedka Gobolka Bari oo tan iyo intii dagaaladii sokeeye ay bilowdeen aan wax horumarin ah la gaarin, dowlad goboleedkii Puntland ee ka talin jirteyna ay ka gaabsatey wax tarka deegaanadaas.
Sidoo kale waxaa weli socda qaab dhismeedka Dowlada iyadoo maalmahan fooda inagu soo haya la dhameystiro doono Golaha Xooghayaasha oo intooda badan hada la magcaabey.
Waxaanu dhowaan isku deyeynaa inaan wareysi cod ah la yeelano Afhayeenka Baarlamaanka Mudane Guure oo hawlo shaqo hada ku jira kuna mashquulsan Deegaanka Dhahar iyo Baraagta Qol.
Raz Shirwa, Badhan, Somalia